Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Airlines: Ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra
Airlines • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kolombia • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fanadihadiana fiaramanidina - Ny tsara indrindra sy ratsy indrindra
Ny fanadihadiana iray namakafaka ny traikefan'ny mpandeha notontosain'ny Bounce momba ny lafin-javatra toy ny serivisy, ny sakafo, ny fampiononana ary ny fialamboly, ary koa ny isan'ny fitarainana sy ny tambin'ny entana ambony indrindra, dia manambara ny tsara indrindra - sy ny ratsy indrindra - ny zotram-piaramanidina any Etazonia sy manerana izao tontolo izao.
Ny Delta Airlines dia voatonona ho ny zotram-piaramanidina an-trano tsara indrindra any Etazonia, raha ny Ana All Nippon kosa dia nomena anarana hoe zotram-piaramanidina iraisam-pirenena tsara indrindra eran-tany, tamin'ny fikarohana vaovao.
Ny sidina an-trano 5 tsara indrindra any Etazonia
laharana airline Tonga ara-potoana (Jolay 2021) Fitarainana Jan-Jona 2021 Serivisy mpiasa (/ 5) Sakafo (/5) Fampiononana seza (/5) Fialam-boly amin'ny sidina (/5) Tambin'ny entana ambony indrindra (kg) Score Index an'ny fiaramanidina /10
2 Hawaii Airlines 87.7% 115 3 3 3 2 22.5 8.5
Ny laharana voalohany dia ny Delta, nahazo isa ambony indrindra satria izy no manana ny isan-jaton'ny fahatongavana ara-potoana faharoa avo indrindra (86.7%) ary somary ambany ny fitarainana, 494 nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2021.
Tonga eo amin'ny laharana faharoa ny Hawaiian Airlines. Miorina ao Honolulu, io no fahafolo lehibe indrindra fiaramanidina ara-barotra any Etazonia. Na eo aza ny fahatongavana faharoa amin'ny ankapobeny, io no zotram-piaramanidina ara-potoana indrindra miaraka amin'ny 87.7% amin'ny sidina miainga ara-potoana. Na dia izany aza, diso fanantenana noho ny tsy fahampian'ny fialam-boly an-tsambo, izay nahazo isa roa amin'ny dimy fotsiny.
Ny sidina iraisam-pirenena 5 tsara indrindra eran-tany
laharana airline Fitarainana Jan-Jona 2021 Serivisy mpiasa (/ 5) Sakafo (/5) Fampiononana seza (/5) Fialam-boly amin'ny sidina (/5) Tambin'ny entana ambony indrindra (kg) Score Index an'ny fiaramanidina /10
Miorina ao Tokyo, Ana All Nippon Airways no zotram-piaramanidina lehibe indrindra any Japana amin'ny alàlan'ny vola miditra sy ny isan'ny mpandeha. Izy io dia manana ny laharana ambony indrindra amin'ny serivisy mpiasa manana naoty ho an'ny mpanjifa, ny zotram-piaramanidina tokana ao amin'ny lisitray nahazo naoty feno ao amin'ny tondron'ny zotram-piaramanidina ho an'ity anton-javatra ity. Kely ihany koa ny fitarainana ao amin'ny 34.
Laharana faharoa ny Singapore Airlines noho ny tambin-karamany ambony 30 kilao, ny fitarainana kely (23), ary ny fampiononana seza ambony, nahazo mari-pankasitrahana noho ny fipetrahan'ny fiaramanidina. Ny Singapore Airlines dia nahazo isa efatra amin'ny dimy ho an'ny sokajy tsirairay ao amin'ny fanondronay, ka tsy mahagaga raha ity mpitatitra ity no tonga faharoa amin'ny laharanay ho mpitatitra iraisam-pirenena tsara indrindra.
Ny sidina iraisam-pirenena 5 ratsy indrindra eran-tany
Ny zotram-piaramanidina Viva Air Colombia dia nomena anarana hoe zotram-piaramanidina ratsy indrindra eran-tany. Ity mpitatitra ity dia mahazo isa iray amin'ny dimy ao amin'ny fanondroanay ho an'ny sakafo, fampiononana seza ary fialamboly amin'ny fiaramanidina noho ny zava-misy fa vitsy ny kojakoja omena ny mpanjifa maimaim-poana. Na dia nahazo fitarainana ambany indrindra aza izy tamin'ny ankapobeny.
Miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Monterrey any Meksika, mitondra mpandeha ao anatiny ny VivaAerobus Airline ary miasa amin'ny sidina iraisam-pirenena mankany amin'ireo tanàna any Etazonia. Mahazo isa iray amin'ny dimy ao amin'ny tondrontsika izy io ho an'ny fialamboly sy sakafo an-tsambo ary roa amin'ny dimy ho an'ny serivisy mpiasa.
Ny tatitra feno dia azo jerena eto.